Umbuzo: Ngaba uMjikelo omnye weTestosterone uyakukulimaza-iBikeHike
Kuthatha ixesha elingakanani ukubuyela kumjikelezo we testosterone?
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba i-testosterone steroids ingene?
Kufuneka ndilinde ixesha elingakanani phakathi komjikelo?
Kwenzeka ntoni xa ndiyeka ukuthatha i-testosterone?
Ngaba i-TRT yenza bufutshane ubomi bakho?
Liliphi ixesha elifanelekileyo losuku lokutofa i-testosterone?
Ngaba i-testosterone i-steroid?
Ngaba ukukhupha ubudoda kukwenza ube buthathaka?
Ziziphi iingenelo zokungaziphululi amalungu esini?
Ziziphi iziphumo zecala le testosterone eninzi?
Ngaba iipilisi ze testosterone zimbi?
Ngaba abantu abane testosterone ephezulu bahlala ixesha elide?
Ngaba kulungile ukuba indoda ithathe i-testosterone?
Mingaphi iminyaka onokuhlala kuyo kwi-TRT?
Ngaba i-1 ml ye-testosterone eninzi?
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba izithonga ze testosterone ziqale ukusebenza?
Ngaba unokugqithisa kwi-testosterone shots?
Yeyiphi eyona steroid ikhuselekileyo yokwakha izihlunu?
Yiyiphi eyona steroid inamandla?
Yiyiphi i-steroid engcono kakhulu yobunzima?
Ngaba unokujova i-testosterone kwiibhola zakho?
Ngaba i-testosterone boosters ikhuselekile?
Phantse onke amadoda ayenogxininiso lwe testosterone lubuyela kwisiqhelo kwiinyanga ezintathu emva kokuphela komjikelo, kunye ne-100% ngeenyanga ezili-12, ngokubonelela ukuba banomsebenzi oqhelekileyo we-gonadal ekuqaleni kwesifundo.
Iziphumo. Iziphumo kumdla wesondo zivela emva kweeveki ze-3 zinyuka kwiiveki ze-6, kungabikho ukunyuka okulindelwe ngaphaya. Utshintsho kwi-erections / ejaculations kunokufuna ukuya kwiinyanga ezi-6. Iziphumo kumgangatho wobomi zibonakala kwiiveki ezi-3-4, kodwa iinzuzo eziphezulu zithatha ixesha elide.
Isithuba phakathi kweMijikelo Oko kuthetha ukulinda malunga neeveki ezi-4 ukuya kwezi-6 emva kokudluliselwa kwe-embryo kunye novavanyo lokukhulelwa okungalunganga ukuqala omnye umjikelo opheleleyo kuninzi lwabasetyhini. Ukwenza oku amatyeli aliqela ngokulandelelana kubhekiselwa kuko njengokubuyela umva kwimijikelo ye-IVF. Xa imijikelo iqelelene ngakumbi, inokubhekiswa kuyo njengelibaziseke.
Ukuba uye wasebenzisa i-testosterone eninzi, ukuyeka iyeza kunokubangela iimpawu zokurhoxisa ezingathandekiyo, ezifana nokudandatheka, ukukhathala, ukucaphuka, ukulahlekelwa ngumdla, iingxaki zokulala, okanye ukunciphisa i-libido.
Imiba ye-cardiovascular edityaniswe ne-TRT iye yacaciswa zizifundo zamva nje ezibonisa ukuba unyango oluhambelana nokunyuka okucacileyo kumanqanaba e-serum testosterone kuluhlu oluqhelekileyo lunxulumene nokunciphisa konke okubangela ukufa.
Ngokwesiko, kusekuseni. Akuyimfuneko ngokwesayensi ukujova i-testosterone ekuseni, nangona i-testosterone yethu ikumanqanaba aphezulu ekuseni.
I-Anabolic steroids I-hormone ye-anabolic steroid ephambili eyenziwa ngumzimba wakho yi-testosterone. I-Testosterone ineempembelelo ezimbini eziphambili emzimbeni wakho: Iziphumo ze-Anabolic zikhuthaza ukwakhiwa kwemisipha. Iziphumo ze-Androgenic zijongene neempawu zendoda, ezifana neenwele zobuso kunye nezwi elinzulu.
Ngaba Ukuphulula Amaphambili Kubangela Ubuthathaka? HAYI, Ukuphulula amalungu esini akubangeli buthathaka. Ihomoni yeprolactin ikhutshwa ngexesha lokuphulula amalungu esini kwaye njengoko ngokwezifundo Iprolactin inokuchaphazela ubuthongo, ngaloo ndlela ikwenza uzive udiniwe kwaye uyozela. Inyani eyonwabileyo, abantu abaninzi bade baphulule amalungu esini ukuze bancede balale kwaye banciphise uxinzelelo.
Ukuyeka ukukhupha i-ejaculating iintsuku ezimbalwa kunokunyusa i-testosterone kunye nokuphucula umgangatho wesidoda. Nangona kunjalo, akukho naluphi na uphando lokuxhasa amanye amabango anxulumene nokungaziphululi amalungu esini. Uninzi lweengcali ziyavuma ukuba ukuphulula amalungu esini kuyinxalenye ephilileyo nebalulekileyo ekukhuleni okuqhelekileyo ngokwesini.
Amadoda anamanqanaba aphezulu e testosterone anokufumana: i-acne. ukuziphatha ndlongondlongo okanye umngcipheko. iinwele ezininzi zomzimba. intloko ebuhlungu. iingxaki zentliziyo okanye zesibindi. Uxinzelelo lwegazi oluphezulu (i-hypertension) i-high sex drive (i-libido) yandisa umdla wokutya.
LWESITHATHU, Oct. 26, 2016 (IiNdaba zoSuku lweMpilo) - I-testosterone eyongezelelweyo kunye ne-anabolic-androgenic steroids ehambelanayo (AAS) inokubangela ukuhlaselwa kwentliziyo, ukuguqulwa kobuntu kunye nokungabikho komntwana, kwaye ixhatshazwa ngokulula, i-US Food and Drug Administration iyalumkisa.
Uthi amanqanaba aphezulu e testosterone anxulunyaniswa nobomi obude kwaye abantu abaphila ixesha elide banamanqanaba angcono ehomoni.
I-Testosterone inoxanduva lokunyuka kwemisipha. Ubunzima bomzimba obubhityileyo bunceda ukulawula ubunzima kunye nokwandisa amandla. Kumadoda ane testosterone ephantsi, uphando lubonisa ukuba unyango lunokunciphisa ubunzima bomzimba kunye nokwandisa ubungakanani bemisipha kunye namandla.
Ngokuqhelekileyo, unyango lwe testosterone lunyango oluqhubekayo oluqhubeka ixesha elide, ukuba alukho ngonaphakade. Njengoninzi lweemeko ezingapheliyo, ukuyeka unyango kunokubona iimpawu zakho zibuya njengamanqanaba e testosterone kwakhona awela ngaphantsi kwamanqanaba anempilo.
I-1 ml ngeveki yi-200 mg ngeveki ye testosterone. Eli lithamo lokubuyisela elingaboniswanga ukwandisa ubunzima obubhityileyo kakhulu kwixesha elifutshane. Nangona kunjalo, ukusebenzisa iidosi eziphezulu kunokunyusa ukuveliswa kweeseli ezibomvu zegazi kunye ne-viscosity yegazi, ngoko ugqirha wakho kufuneka ahlole amanqanaba egazi lakho le-hematocrit.
Ngaba Unyango lweTestosterone ephantsi luza kuqala nini ukusebenza? Kumadoda amiselwe unyango lokubuyisela i-testosterone, ihlala ithatha iinyanga ezintathu ukuya kwezintandathu ukusebenza, utshilo uFarooq. “Amanye amadoda anokubona ukuphucuka kwakamsinya, kodwa kumadoda amaninzi yinkqubo ehamba kancinci,” utshilo uFarooq.
Biza ugqirha wakho ngemiyalelo ukuba uphoswa idinga lenaliti yakho ye testosterone. Ekubeni eli yeza linikezelwa yingcali yezempilo kwimeko yonyango, ukugqithisa akunakwenzeka ukuba kwenzeke.
I-Testogen ngokwenene i-booster ye-testosterone, kwaye iqulethe i-stack yezithako ezinamandla, okwenza kube yinto egqibeleleyo, yendalo, kunye nekhuselekile kwi-steroids. I-anabolic steroids yangempela ngokuqhelekileyo ziindlela ezahlukeneyo ze testosterone, ngoko kunengqiqo ukuba i-testosterone booster iya kukunceda ukwakha imisipha.
Kukho iinguqu ezingaphezu kwe-100 ze-anabolic steroids. I-androgen enamandla kakhulu yi testosterone (ebizwa ngokuba yi-tess-TOSS-tuh-rone). Nangona i-testosterone ubukhulu becala iyihomoni yamadoda aqolileyo, imizimba yamantombazana ivelisa izixa ezincinci.
I-Trenbolone kunye ne-Dianabol; I-Dianabol yi-steroid yokuzikhethela kubantu abafuna ukwakha ubunzima obukhulu bemisipha ngexesha elifutshane. Le steroid iphawulwa ngamandla ayo, kwaye ukuyongeza kwi-stack yakho kunye ne testosterone iya kuxhobisa umjikelo wakho wobuninzi.
Xa kuchazwe kwifom yekhilimu kunye nesiseko esifanelekileyo esisisiseko, i-testosterone ye-transdermal ingasetyenziswa kwi-scrotum. Ulusu lwe-Scrotal lubhityile kwaye lunokungena okuphezulu kwe-steroid. Kubaluleke kakhulu ukunqanda ukusebenzisa ikhrimu okanye ijeli enotywala njengoko utywala buyingozi kwimpilo yolusu lwe-scrotal.
Ngaba izongezo ze testosterone zikhuselekile? Ezinye ze-OTC testosterone boosters zingakhuseleka xa zisetyenziswe ngokumodareyitha, kodwa azikwazi ukuphakamisa ngokusisigxina okanye ukugcina amanqanaba akho e-testosterone. Zonke iintlobo ze-OTC testosterone boosters zibonelela ngengozi yazo ekhethekileyo yezempilo.
Umbuzo: Ixesha elide kangakanani i-Testosterone Cycle
Uyenza njani iCycle Testosterone
Umbuzo: Yiyiphi iTestosterone ephantsi
Yintoni enciphisa iTestosterone
UCanzibe ngoJuni uMjikelo woBomi bebhungane
Impendulo ekhawulezayo: Ngaba unokuhamba nge-Testtosterone
Umbuzo: Uyenza njani iCycle Testosterone
Impendulo eKhawulezayo: May Bike
Umbuzo: Ziziphi ukutya okuphantsi kweTestosterone
Impendulo ekhawulezayo: Kukuphi ukutya okuthoba iTestosterone